आखिर कति धनी छ तालिबान ? कहाँबाट जुटाउँछ पैसा ? — Sanchar Kendra
आखिर कति धनी छ तालिबान ? कहाँबाट जुटाउँछ पैसा ?
काठमाडौँ । यस महिना तालिबानले लगभग पूरा अफगानिस्तानमाथि आफ्नो कब्जा जमाएको छ । अबको केही दिनमा अमेरिकाको नेतृत्व भएको पश्चिमी देशका सेनाले आफगानिस्तान छोडेर जानेछन् । यसै गरी, पछिल्लो दुई दशकदेखि दुई पक्षबीच चलिरहेको संघर्षमा सायद विराम लाग्नेछ ।
तालिबानका लागि गठबन्धन सेनासँग संघर्ष निकै कठिन रह्यो । एकातिर उसँग संसारका दुनियाँको धनी देशका सेना थिए जोसँग न धनको कमी थियो न आधुनिक हतियार नै । अर्कोतर्फ तालिबानको स्थिति यी दुबै मामिलामा ती देशहरुको तुलनामा खासै विशेष थिएन ।
एक अनुमानका अनुसार सन् २०११ मा तालिबानी लडाकूको संख्या ३० हजार थियो । सन् २०२१ को मध्यमा उसको लडाकूको संख्या बढेर ७० हजारदेखि १ लाखको बीचमा रह्यो ।
यस्तोमा यति ठूलो संगठन र चरमपन्थी अभियान चलाउनका लागि भारी आर्थिक मद्दतको आवश्यकता त पर्छ नै । यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि तालिबानले यसका लागि आर्थिक मद्दत कहाँबाट पाउँछ ? यो मद्दत देशभित्रबाट हुन्छ वा बाहिरबाट ?
तालिबानले अफगानिस्तानमा सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गरेको थियो । तर चुनौती यो हो कि तालिबानको आयबारे यस्तो कुनै विश्वस्त र ठोस् जानकारी सर्वसाधारणबीच छैन । उनीहरु बारे धनको आवागमनलाई बुझ्नु एक प्रकारको अनुमान लगाउनु जस्तै हो ।
यद्यपि, बीबीसीले अफगानिस्तान भित्र र बाहिरका यस्ता थुप्रै मानिसहरुसँग कुराकानी गरेर अत्यधिक सुचना जुटाएको छ । यसमार्फत् थाहा हुन्छ कि तालिबानको आर्थिक ढाँचा निकै जटिल छ ।
सन् २०११ मा तालिबानको वार्षिक आय लगभग ४६०० करोड रुपैयाँ थियो । तर बीबीसीले आफ्नो अनुसन्धानमा सन् २०१८ को अन्त्यसम्म यो आँकडा बढेर १७ हजार ५ सय रुपैयाँ भएको छ । अबको केही दिनमा नै उनीहरुले अफगानिस्तानको सरकार सञ्चालन गर्दैछन् । यस्तोमा उनीहरुको आय श्रोत निकै बढ्नेछ ।
तालिबानको आम्दानीका चार प्रमुख स्रोतः
तालिबानबारे एक आम धारणा यो छ कि उसको कमाईको मुख्य माध्यम अफिम र त्यसबाट बन्ने नशालु पदार्थ हेरोइन हो । तर जानकारका अनुसार यो कुरा पूर्ण रुपमा सही होइन ।
जानकारका अनुसार अफिमबाहेक तालिबानको कमाई उसले कब्जा गरेको इलाकामा लगाइने विभिन्न प्रकारको करमार्फत् पनि हुन्छ । साथै, विदेशबाट पाउने चन्दा र खनिजको कारोबार पनि उसको कमाईको मुख्य स्रोत हो । वास्तवमा तालिबानको आयका चार प्रमुख स्रोत छन्ः
विदेशबाट पाइने चन्दाः
नशालु औषधीको कारोबार ?
तालिबानले लामो समयदेखि अफिम, हेरोइनजस्ता नशालु औषधीको अवैध कारोबार गर्दै आएको धेरैले बताउने गर्छन् ।स्मरण रहोस्, अफगानिस्तान संसारको सबैभन्दा ठूलो अफिम र हेरोइन उत्पादक हो । हेरोइन, अफिमबाट तयार हुन्छ । एक अनुमानका अनुसार अफगानिस्तानबाट हरेक वर्ष १.५ देखि तीन अर्ब डलरको अफिम अन्य देशमा पठाइन्छ ।
इलाकामाथि कब्जा जमाउनुः
खानी र खनिजः
खनिज र मूल्यवान वस्तुको मामिलामा अफगानिस्तान निकै धनी छ । दशकौंदेखि देशमा लडाईं भइरहेका कारण हाल यसको पर्याप्त दोहन हुन सकेको छैन । अफगानका पूर्व अधिकारीका अनुसार हाल देशको उत्खनन उद्योग एक अर्ब डलर आसपास छ ।
देशको धेरैजसो उत्खनन साना स्तरका छन् र अधिकांस अवैध ढङ्गले हुँदै आएका छन् । तालिबानले यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण गर्दै वैध र अवैध सबै प्रकारका उत्खननबाट असाध्यै कमाई गरेको छ ।